दलान नेपाल : मधेशमा अवैध हतियारको साम्राज्य
मधेशमा अवैध हतियारको साम्राज्य
at 1:27 AM Posted by Dalan
राकेश चौधरी /जलेश्वर(महोतरी)
प्रहरीले राजन मुक्ति, दीपक सिंह, मुकेश चौधरी जस्ता सशस्त्र समूहका नेतालाई पक्राउ गरेता पनि गोईत तथा ज्वालासिंह जस्ता ठूला सशस्त्र समूह तराईमा सक्रिय छन् । धेरै नाफा दिने र ठूलो कारवाहीमा नपरिने भएकाले हतियारको कारोवारमा सीमा क्षेत्रका साना देखि ठूला व्यापारी समेत सक्रिय हुनाले यस क्षेत्रमा हतियारको साम्राज्य चलेको छ ।
पूर्वी तराईको गाउँ गाउँमा आतंक फैलिएको छ । हतियारका व्यापारी र प्रयोगकर्ताहरु फैलिन थालेका छन् । प्रहरी भन्छन्—अपराधीहरु बढेकाले गस्ती बढाईएको छ । कतिपय ठाउँमा सोझो भीडन्त समेत पर्न थालेको छ ।
महोत्तरीको हलखोरीमा माघ १९ गते र महोत्तरीकै सोनामा गाउँको उखुवारीमा माघ २३ गते प्रहरी र अवैध हतियारधारीवीच भीडन्त हुँदा क्रमश रामगोपालपुर दोलाठीका जकाउल्लाह नदाफ र बर्दिया बन्चौरीका सेराजुल नुरीको मृत्यु भएको थियो । घटनापछि प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर बतायो, यी दुवै घटनाका मृतकहरु लुटपाट, अपहरण लगायतका अपराधमा प्रहरीको खोजी लिष्टमा थिए । दुवै घटनामा राती २ बज सोझो भीडन्त परेको थियो ।
तर मृतक नुरी र नदाफका आफन्तले जलेश्वरमै अर्को पत्रकार सम्मेलन गरेर भने, “हाम्रो मानिसलाई प्रहरीले धेरै पहिले पक्राउ परेका थिए । भीडन्त त पछि भएको हो ।” उनीहरुले प्रहरीमाथि फर्जी मुठभेड सिर्जना गरेर गैरकानूनी हत्या गरेको आरोप लगाउँदै मानव अधिकार आयोग, प्रहरी तथा प्रशासन कार्यालयका साथै विभिन्न निकायमा उजुरी दिएका छन् । यस घटनापछि, स्थानीय बासिन्दाले सोध्न थालेका छन्—हरेक भीडन्त रातको २ बजे नै किन हुन्छ ?
गत फाल्गुण १३ गते विहार महुआहीका नवीनकुमार सिंह र मरहाकी रिता सिंह जलेश्वर कारागारमा सजाय काटिरहेकी ललिता सिंह ( पत्रकार उमासिंहकी भाउजु) संग भेट गर्न आए । जेल प्रशासनले रितासिंहको ह्याण्ड ब्याग जाँच गर्दा पेस्तोलमा लाग्ने गोली फेला परेपछि उनीहरुलाई पक्राउ ग¥यो । जेल जस्तो कडा सुरक्षा व्यवस्था भएको ठाउँमा समेत साना हतियारधारीले पहुँच बनाउन खोज्नुले यस क्षेत्रमा अपराधको साम्राज्य स्थापना गर्न अवैध हतियारधारीहरु सक्रिय रहेको देखिएको छ ।
सर्लाहीको हरकठुवा लगायतका गाउँमा यस्तै अपराधीहरुले आतंक फैलाई रहेका छन् । साना हतियारको बलमा लुटपाट र अपहरण गरिरहेका छन् । मोतिपुर गाविस ३ का राजेश साह र दिनेश साह तथा खुटौनाका सुरज पासवानलाई फाल्गुण १गते, तीन थान गोली र एक थान नलकटुवा बन्दुक सहित प्रहरीले पक्राउ गरेर पूर्पक्षका लागि कारागारमा राखेको छ । तर सर्लाहीमा आतंक सकिएको छैन ।
साना हतियारको बलमा राजमार्गमै यात्रुवाहक बस लुटियो । नुवाकोटका राजकुमार अधिकारी, अमरसिंह तमाङ्ग, सिन्धुलीका उत्तमबहादुर कार्की, धादिङ्गका राजकुमार गुरुङ्ग, सिरहाका समिर लामा र महोत्तरी हातिलेटका मदन गिरीले बस लुटेपछि महोत्तरीमा संरक्षण लिएका थिए । माघ २९ गते माईस्थानबाट उनीहरु पक्राउ परे । तर हतियारको आतंक रोकिएन ।
यसै दिन कोल्हुवा वगेयाका ३० बर्षीय दिपु भन्ने विमलेन्द्रकुमार शर्माले आफ्नै बुबालाई गोली हाने । विमलेन्द्र पक्राउ परेपछि, बाबु र छोरावीच हतियारको कमाई भागबण्डा नमिलेकोे रहस्य खुल्यो । हतियार व्यापार र प्रयोगको प्रतिस्पर्धाले बाबुछोरावीचमा गोली हानाहान भएको सुनेका स्थानीयहरु भन्छन्—यहाँ त हतियारको आतंक घर भित्रै घुसिसकेछ ।
दोश्रो संविधान सभाको पूर्वसन्ध्यामा, कार्तिक १४ गते नेपाल र भारतका सीमावर्ती प्रान्तका सुरक्षाकर्मीवीच सीतामढीमा जिल्लास्तरीय बैठक बसेर नेपालको मोरङ, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्ला तथा बिहारको सितामढीलाई अवैध हतियारको भय रहेको जिल्ला ठम्याए । यिनै जिल्लामा अवैध हतियारको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न संयुक्त संयन्त्र पनि बनाए । नेपाली सुरक्षा स्रोतले भन्यो, यस्ता वैठक वर्षेनी हुन्छन्, तर हतियार आउन छाड्दैन ।”
दुवै देशका सीमा सुरक्षा बलले वर्षेनी यस्ता वैठक गरे पनि यस क्षेत्रमा अवैध हतियारको व्यापार र सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।
नेपाल —भारतवीच संयुक्त सुरक्षा संयन्त्र बनेको २ दिन पछि, कार्तिक १६ गते राती सर्लाही जिल्लासँग जोडिएको भारतीय क्षेत्र बिशम्भरपुरबाट हतियारको खेप लिएर दुईजना हतियारधारी सीमानासम्म आए । भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तिनलाई मेजरगंज निवासी बैधनाथ सहनी र सुरेश सहनी भनेर पहिचान गरेर उनीहरुको साथबाट ९ थान पेस्तोल, २ थान राइफल र ४६ थान गोली बरामद ग¥यो । तर हतियारधारीहरु पक्राउ परेनन् ।
कार्तिक २० गते महोत्तरीको सुगा गाउँबाट ईटालियन ट्याग लगाईएको पेस्तोल र त्यसको गोली लिएर हिँडीरहेको अवस्थामा जलेश्वरसंग सीमा जोडिएको बिहार राज्यको श्रीखण्डी भिठ्ठाका मिथिलेश कुमार सिंह र दिवारीका रत्नेश कुमार यादव पक्राउ परे । यी दुबैजनाले प्रहरीलाई बयान दिँदा महोत्तरी पिपराका जयगोविन्द मिश्राले हतियार मगाएको हुनाले ल्याईदिएको भनि बयान दिए । जयगोविन्द मिश्रा धरौटीमा छुटेर स्वतन्त्र घुमिरहेका छन् ।
कार्तिक २८ गते महोत्तरी प्रहरीले अर्का भारतीय नागरिक विजय साहलाई हतिायार र लागू औषध सहित पक्राउ ग¥यो । साहले पनि आफ्ना ग्राहकहरुको नाम प्रहरीलाई उपलब्ध गराए । तर ती ग्राहकको नाम प्रहरी घेराभित्रै हरायो । विजय साहलाई हातहतियार तथा खरखजानाकोे मुद्दा पनि चलेन । स्थानीय व्यापारीहरु भन्छन्— “राजनीतिक शक्ति” मथि सीडिओ र प्रहरीले हातै हाल्दैनन् ।
अवैध हतियार र लागू औषध बेच्न नेपाल छिरेका यी भारतीय युवकहरु “लेग वर्कर” मात्र थिए । यिनलाई संचालन गर्ने चाहिँ नेपाल र भारतका सीमा क्षेत्रमा राजनीतिक शक्ति बनेर बसेका छन् । यिनले आफ्ना “मजदुर”लाई बचाउन “राजनीतिक शक्ति” प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
महोत्तरीमा अवैध हतियारको व्यापार गर्न नेपाल आएका एक भारतीय कारोवारीले आफ्नो नाम नलेखिदिन अनुरोध गर्दै भने—‘हाम्रो काम पैसा र समय हेरेर ग्राहकको हातमा “माल” पु¥याई दिनु हो । नेपालमा हतियार र लागू औषधको माग धेरै छ, हामी व्यापारी हौं । “माल दिन्छौं, मोल लिन्छौं” । यसपालीको संविधानसभामा पनि हतियार बेचेकै हो ।’
पुष १३ गते महोत्तरी सशस्त्र प्रहरीले मटिहानीबाट सानो आकारको एयरगनसहित धिरापुरका २८ बर्षीय जमानुदिन अन्सारी र हलखोरीका ३५ मोहम्मद कमर राजालाई पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझायो । तर यिनीहरु उपर हातहतियार र खरखजाना मुद्दा अभियोजन हुन सकेन ।
जलेश्वरका पुराना व्यापारीहरु भन्छन््—तराईका सीमावर्ती जिल्लाहरुमा हतियारको कारोवार सबैभन्दा फाईदाजनक व्यवसाय बन्न पुगेको छ । यहाँका भद्र व्यापारीहरु पनि मौका पाउने अवैध हतियारको व्यापार गरेर फाईदा उठाउन चुक्दैनन् ।
यिनै मध्ये एक व्यापारीले आफ्नो नाम गोप्य राखिदिन अनुरोध गर्दै भने— चुनावको समयमा हतियारको माग आउँछ । “दिग्गज नेताहरु” आपसमा भिडेको बेला व्यापार पनि राम्रो हुन्छ ।
संविधानसभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनमा हतियार व्यापारी राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारीको जुलुसमा समेत देखापरेका थिए । ती व्यापारीले भने—‘हतियार चलाउने मान्छे सक्रिय रहेसम्म हाम्रो व्यापार चलिरहन्छ ।”
मंसिर ४गते अर्थात संविधानसभा निर्वाचनको दिन, मतदान भैरहेको समयमा सर्लाहीको धनकौल र बलरा गाउँमा दिउँसो ११ बजे तिर एकाएक गोली चल्यो । घटनामा १२ जना भन्दा बढी भए । घाईतेहरुलाई उपचारका लागि मलंगवा अस्पताल ल्याईएको थियो । उनीहरुले आफूहरुमाथि गोली प्रहार गर्ने मानिसहरु भनेर डा. अमरेशकुमार सिंहका कार्यकर्ताको नाम दिए । तर प्रहरीले सुनेन । यो घटना त्यसै सेलाएर गयो । मंसिर ४ गते नै महोत्तरीको पर्सादेवाडमा गोली हानाहान हुँदा एक समूहले अर्को समूह विरुद्ध नामै किटेर उजुरी दियो । तर प्रहरीले पक्राउ गर्नु त परै जावस खोज्ने प्रयास पनि गरेन । घटनामा पीडित एक युवकले भने—प्रहरीले चुनावी मामिला भनेर अवैध हतियारको मामिला दवाई दियो ।
मंसिर ९ गते राती धनुषाको रामानन्द चोकमा हवाई फायर गर्ने ३६ बर्षीय प्रकाश मिश्र एक राउण्ड गोली र दुईनाले बाह्रबोर बन्दुकसहित पक्राउ परे । तर उनलाई थप कारवाही भएन ।
राजनमुक्ति समूहले असार २ गते, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालको जलेश्वरस्थित पार्टी कार्यालयमा गोली चलाएर कार्यालय सचिव रामप्रगाश साहलाई घाइते बनायो । यही समूहले त्यसै दिन मनरामा आक्रमण गरेर शैलेन्द्रकुमार मण्डल र बिकासकुमार सिंहलाई घाइते बनायो । अनि असार ५ गते मनरामा पुन आक्रमण गरेर अभयकुमार सिंह र श्रीमती सोनमकुमारी सिंहलाई घाइते बनाई दियो ।
यस समूहले ४ दिन भित्रमा ३वटा जघन्य अपराध गरेता पनि प्रहरीको फन्दामा पर्नु परेन । घाईते भएका एक पीडित भन्छन्—प्रहरीले अपराधीको खोजी गर्नुको साटो नेता—नेतावीचको झगडा हो, उनीहरु आफै मिलाउँछन् भनेर छाडिदिए ।
यस घटनाको लगतै सरपल्लो गाविसका बिक्रम सहनी अपहरणमा परे । अपरहरणकारीहरुले उनको हत्या नै गरिदिए । तर अपराधी फेला परेनन् । यसपछि अपहरणका घटनाहरु पनि बढ्न गए ।
हतियारको अवैध कारोबार गर्नेहरु प्रहरीको फन्दामा पर्ने वित्तिकै नेताको फोन र दवाव आउँछ । महोत्तरी सीमा चौकीका एक प्रहरी अधिकृतले भने— पक्राउ गर्यो, नेताहरुले तुरुन्त छाड् भनेर धम्क्याउँछन् । आफ्नै सुरक्षाको हतियार दिएको भनेर नेताहरु नै बयान दिन आउँछन् र छुटाएर लैजान्छन् ।
नाम वताउन नचाह्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने,‘हतियारसहित पक्राउ परेकालाई राजनीतिक दवावका कारण समान्य तारिख वा धरौटीमा छोड्न दवाव आउँछ । सीडिओ र प्रहरी प्रमुख एक मत भएपछि अपराधी छुट्छन् । प्रहरीलाई चित्त बुझेन भने मात्र मुद्दा चलाउँछन् ।’
धनुषा र महोत्तरी - अवैध हतियार र लागु पदार्थको व्यापार
तराईमा हतियार सप्लाई गर्नेहरुले लागूऔषधको कारोवार पनि गर्छन् । महोत्तरीको सुगा गाउँबाट कार्तिक २० गते पक्राउ परेका राजनमुक्ति समूहका एसटीएफ कमाण्डर सिंह र धनुषा उमाप्रेमपुर ६ का २६ बर्षीय दिपेन्द्र झाको साथबाट अवैध हतियार सहित ठूलो परिमाणमा लागूऔषध पनि बरामद भएको थियो ।
महोत्तरीको कर्मटोकीलाई त हतियार व्यापारीहरुले मुख्य कारोबार स्थल नै बनाएका थिए । गत वर्ष कर्मटोकीमा हतियारको कारोवार हुन लागेको सुरकी पाएर प्रहरीले छापा मार्दा हातिलेटका मंगलसिंह बिश्वकर्मा र बिजलपुराका शिवकुमार महतो पक्राउ परे । यिनीहरुले युएसए निर्मित नौ राउण्ड गोली राख्न मिल्ने नौ एमएमको पेस्तोल र युएसए निर्मित आर्मी ब्राण्डको ७१११ नम्बरको ५.५६ एमएमकोे पेस्तोलको व्यापार गर्न लागेका थिए ।
मंगलसिंह बिश्वकर्मा, ०३६ सालमा प्रहरी सेवा त्यागेर हतियार व्यापारी बनेका थिए । विश्वकर्माले आफूलाई भारत “सीतामढीका जामुन ठाकुरले हतियार दिएको” बताएका थिए । तर जामुन ठाकुरलाई सीमा प्रहरीले खोजी नै गरेन ।
महोत्तरीको रामनगर पनि हतियार कारोवार गर्ने स्थल बनेको थियो । यहाँबाट एकथान नलकटुवा बिक्री गर्न खोजिरहेका रामनगर—७ निवासी ३० बर्षीय जनक महत्तो असोज १ गते राती पक्राउ परेका थिए । यिनले प्रहरीलाई दिएको बयानमा भनेका थिए—बिहारको मुंगेर शहरका साहु (व्यापारी)ले नेपालका ठूला नेतालाई दिन भनेर उक्त हतियार पठाएका हुन् ।
धनुषा उमाप्रेमपुर—६ का २६ बर्षीय दिपेन्द्र झा पनि गाउँमै बसेर तीनवटा गोलीसहित एउटा पेस्तोल बेच्न लाग्दा पक्राउ परे । यिनीसंगै औरही—३का २० बर्षीय जितेन्द्र सदा पनि एकथान नलकटुवा बेच्न लागेको बेलामा पक्राउ परे ।
यी दुईले पनि प्रहरीलाई, “विहारको मुंगेर जिल्ला र सितामढीको सुरसण्डमा हतियार बनाउने कारखाना रहेको र त्यहीँबाट उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, बंगलादेश र नेपालका विभिन्न ठाउँमा हतियारहरु सप्लाई हुने बताएका थिए ।”
सुरसण्डका हतियार व्यापारीहरु भन्छन््—अचेल देशीकट्टा भन्दा सानो पेस्तोल चलेको छ ।
धनुषाको तुल्सीयाही जब्दी ७ पनि हतियार किनबेच स्थल बनेको थियो । यहाँ अवैध हतियार किनबेच गरिरहेको अवस्थामा महोत्तरी, बथनाहा निवासी दीपकसिंह, ९ एमएमको एउटा पेस्तोल र २वटा गोली सहित पक्राउ परेका थिए ।
धनुषाका प्रहरी उपरिक्षक उत्तमराज सुवेदीको टोलीले कार्तिक १५ गते तुल्सीयाही जब्दीबाट हतियार व्यापारी दीपक सिंहलाई पक्राउ ग¥यो । पक्राउ परेपछि प्रहरीलाई बयान दिंदै सिंहले भने—म त धनुषाको “ठूलो नेता”लाई सहयोग गर्न आएको हुँ ।
प्रहरीको भन्छन्—हामीले लाख कोशिस गर्दा पनि उनीहरुले “ठूलो नेता”को नाम बताएनन् ।
अवैध हतियार कारोबारको अध्ययन गर्ने सिलसिलामा पटना पुगेर स्थानीय प्रहरीहरुसंग कुरा गर्दा उनीहरुले स्पष्ट भने—“मुंगेर र नालान्दा त अवैध हतियारको मुख्य सप्लायर हो । सितामढी र गयामा पनि हतियार बन्छ । नेपालमा हतियार दिने तिनीहरु नै हुन सक्छन् ।”
नेपालमा हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा अन्तर्गत सजाय काटिसकेका एक युवकले भने—‘सितामढीमा बनेका हतियार नेपालमा विक्छ । लोकल व्यापारीहरु नै बिचौलिया बनेर सुरसण्डसम्म ग्राहक लिएर आउँछन् ।’ सुरसण्ड बजार जलेश्वरबाट १० किलोमिटर दक्षिणमा छ ।
ती युवक अहिले हतियार व्यापारी बनेका छन् । भन्छन्—सानो समूह र नयाँ युवाहरुले देशीकट्टा अर्थात् नलकटुवा मनपरउँछन् । एउटा देशीकट्टाको भारतमा भारु. ३५ सय पर्छ । सुरसण्ड बजारमा भारु ७ हजार हुन्छ । नेपालमा नेरु. २५ हजारसम्म पाईन्छ ।
उनले थपेर भने,सीमावर्ती क्षेत्रमा नलकटुवाको व्यापार सदावहार चलिरहेको छ ।भारतमा ८ देखि १० हजार सम्म पर्छ । नेपालमा ३५ देखि ५५ हजारसम्म पाईन्छ ।
सुरसण्डका व्यापारीहरु भन्छन्—नेपालका नेताहरुले पेस्तोल मगाउँछन् । पक्राउ परेका पेस्तोलहरु आधा दाममा बिक्छ । एउटै पेस्तोल नेपालमा धेरैपटक बिक्छ ।
आतङ्कको चक्र - राजनीतिदेखि अपराधसम्म
राजा महेन्द्रले कू गरेपछि तराईमा हतियारबन्द राजनीति गर्नाका लागि हतियारको अवैध व्यापार शुरु भएको थियो । पहिला भारतीय डाँकाहरुसँग लड्न र आफ्नो सुरक्षाका लागि तराईका जमिन्दारहरुले यस्ता घरेलु हतियार राख्थे । फ्रेडरिक एच.गेजले यस विषयमा अनुसन्धान गरेर प्रकाशनमा ल्याएको नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता नामक पुस्तकमा भनिएको छ—नेपालका मैदानी क्षेत्रका मानिसहरुको माग पूरा गराउन उसबेला रामजी मिश्र समेतले तराई मुक्ति मोर्चाको गठन गरेर अवैध हतियार भित्राएका थिए । उनी जून १९६३मा प्रहरीद्वारा मारिए ।
यस घटना पछि अवैध हतियार र तराईको राजनीतिवीच गहिरो नाता रहन गयो । तराईमा हतियार प्रयोग गर्नेहरु प्रायश नेताहरु नै हुन्थे । अहिले भने अपराधीहरु पनि थपिए ।
२०६९÷७०मा मोरङ्गदेखि कपिलबस्तुसम्मका १३ जिल्लामा १०५वटा हातहतियार तथा खरखजानाको मुद्दा चले । धेरैजसो अपराधीहरु सानो तिनो कारवाही भोगेर उम्किए । प्रहरी चुस्त नभएकाले जफत गरिएका हतियारहरु पुन प्रयोगमा आउन थाले । यसरी तराईमा हतियार आतंकको चक्र चल्न थाल्यो ।
प्रजिअबाट समाधान छैन
जलेश्वरका अधिवक्ता बिकरु यादव भन्छन्—‘हातहतियार तथा खरखजानाको मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुन्ने र फैसला गर्ने व्यवस्था नै समस्याको मूल हो । जिल्लाका नेता र प्रजिअको सम्बन्ध नङ्ग र मासुको जस्तै हुन्छ । यस्ता मुद्दामा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरुले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् । त्यसैले अपराधीहरु उम्कन्छन् । यस्ता मुद्दाहरु प्रजिअको अधिकार क्षेत्रबाट हटाएर न्यायालयको परिधि भित्र नल्याएसम्म समाधान छैन ।
हतियार तथा खरखजाना मुद्दामा ३ देखि ७ बर्षसम्म कैद वा ६० हजार देखि १ लाख ४० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । साना हतियारको हकमा ३ बर्षदेखि ५ बर्षसम्म सजाय वा ६० हजारदेखि १लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिईएको छ । प्रजिअको तजवीज चल्ने हुनाले हतियार व्यापारी र अपराधीलाई नेताले संरक्षण दिन पाएका छन् ।
Unknown November 28, 2014 at 2:49 PM